Engineering izifundo e-Ukraine - Ukrainian Ukwamukelwa Center
Civil, Ukwakhiwa noma Architecture Ubunginiyela
Masters Degree besikhatsi: 2 iminyaka(Yesikole Imali 3500USD / ngonyaka, kanye nezindleko Okuxubile for yr 1st kuphela yokuhlala: 2150USD)
(wathumela ku Ukraine embasi engosini abafundi’ indawo ngokusebenzisa Ministry of Foreign Affairs. Sinikeza ikhophi yalelo Visa Ukusekela / Ukuqinisekiswa kwe kubafundi kanye.) 100$US
Imali Hostel (amakamelo esasisanda kuyilungisa kahle elinempahla yasendlini, abantu ababili ekamelweni elilodwa) 300$US ngonyaka academic
Imali Yesikole unyaka 2 nonyaka wokugcina 2600$US ngonyaka kuhlanganise accommodation.
Yesikole Imali 2700$US
Imali Hostel (amakamelo esasisanda kuyilungisa kahle elinempahla yasendlini, abantu ababili ekamelweni elilodwa) 600$US ngonyaka academic
Consultancy Amacala yokuma kwethu 900$US
Imali Yesikole unyaka 2 nonyaka wokugcina 3000$US ngonyaka kuhlanganise accommodation.
Engineering kagesi & Electronics
Masters Degree besikhatsi: 2 iminyaka(Imali Yesikole 2600USD / ngonyaka, kanye nezindleko Okuxubile for yr 1st kuphela yokuhlala: 750USD)
* izindleko Isimemo 250$US
Imali Hostel (Ingahluka abanye Universities) 600$US unyaka owodwa
Imali Yesikole unyaka 2 nonyaka wokugcina 3000$US ngonyaka kuhlanganise indawo yokuhlala
Masters Degree besikhatsi: 2 iminyaka
Imali Hostel (ingahluka for amanyuvesi ezahlukene, kumelwe reconfirm) 500$US ngonyaka academic
Yesikole Imali kusuka 2 kuya unyaka wokugcina yokuhlala 3000$US ngonyaka
Ukwaziswa kwesimanje (BSc. & MSc.)
Computer Science / Computer Engineering / Computer Systems and Networks / Information Technology / Software Engineering / Telecommunication / Mass Communication, Onjiniyela bamakhemikhali, Electrical / Electronics Engineering, Civil / Architecture Engineering, Automobile Engineering, Amafutha kanye negesi / Petroleum Engineering
Masters Degree besikhatsi: 2 iminyaka(Imali Yesikole 2600EUR / ngonyaka, kanye nezindleko Okuxubile for yr 1st kuphela yokuhlala: 2150USD)
(wathumela ku Ukraine embasi endaweni yomfundi ngokusebenzisa Ministry of Foreign Affairs. Sinikeza ikhophi yalelo umfundi kanye) 50$US
Onjiniyela bamakhemikhali (BSc. & MSc.)
Masters Degree besikhatsi: 2 iminyaka (Imali Yesikole 2600EUR / ngonyaka, kanye nezindleko Okuxubile for nyaka 1st kuphela yokuhlala: 2150USD)
Yesikole Imali 2650$US
* izindleko Isimemo 300$US
Imali Hostel (Ingahluka abanye Universities) 500$US unyaka owodwa
Imali Yesikole unyaka 2 nonyaka wokugcina 3200$US ngonyaka kuhlanganise indawo yokuhlala
Masters Degree besikhatsi: 2 iminyaka (Imali Yesikole 2600EUR / ngonyaka, kanye nezindleko Okuxubile for yr 1st kuphela yokuhlala: 2150USD)
Imali Hostel (ingahluka for amanyuvesi ezahlukene, kumelwe reconfirm) 600$US ngonyaka a6ademic
Aeronautica Aviation Aerospace Ubunginiyela Studies
Ukwamukelwa kanye nemali yokubhaliswa
Imali Yesikole unyaka 2 nonyaka wokugcina 2800$US ngonyaka kuhlanganise accommodation
Amafutha kanye negesi / Petroleum Engineering
Imali Hostel (amakamelo esasisanda kuyilungisa kahle elinempahla yasendlini, abantu ababili ekamelweni elilodwa) 500$US ngonyaka academic
Computer Science / Computer Engineering / Computer Systems and Networks / Information Technology / Engineering Software
Masters Degree besikhatsi: 2 iminyaka(Yesikole Imali 2600USD / ngonyaka, kanye nezindleko Okuxubile for yr 1st kuphela yokuhlala: 700USD)
Isayensi yekhompyutha (BSc. & MSc.)
Imali Yesikole unyaka 2 nonyaka wokugcina 3000$US ngonyaka kuhlanganise indawo yokuhlala.
ukuqeqeshwa Cisco (uhlelo isitifiketi)
ukuqeqeshwa Cisco lakala kulezi zihloko ezithi Ukraine saziwa emhlabeni wonke futhi umfundi ebekelwa “Izitifiketi Emhlabeni esebenzayo” lapho beqeda eyodwa noma zonke izinhlelo.
Ulimi imfundo: Ukuqeqeshwa Cisco itholakala kunoma yiluphi ulimi
Course isiqalo date: Noma nini emhlabeni ngonyaka
mfuneko ubuncane: Noma iyiphi idiploma computer, noma impohlo noma amakhosi degree kunoma iyiphi enkulu.
Ubude besikhathi ukuqedela Cisco: 2 iminyaka. Kodwa uma umfundi owenzé ukuqeqeshwa Cisco ngaphambilini, yena / yona ungaqala esigabeni esilandelayo sokuqeqeshwa. ubude besikhathi Minimum ukuze bathamele lesi eyunivesithi ukuze bathole ukuqeqeshwa ezindabeni Cisco: 6 izinyanga
ukuqeqeshwa ngonyaka One iphakethe: 3500USD kuhlanganisa incwadi Isimemo + Courier Amacala + Bank Trasaction amacala (425SD), Visa ukweseka, Imali Yesikole, Indawo ehostela nyuvesi, Umshwalanse we mpilo, Immigration Insurance, Ukubhalisa at uMnyango Wezifiki, Amaphepha adingekayo ukuze usule Airport Immigration, Air port iveni, Transport eyunivesithi, Consultancy kanye inkonzo yethu amacala.
6 izinyanga ukuqeqeshwa iphakethe: 3000USD kuhlanganisa incwadi Isimemo + Courier Amacala + Bank Trasaction amacala (425SD), Visa ukweseka, Imali Yesikole, Indawo ehostela nyuvesi, Umshwalanse we mpilo, Immigration Insurance, Ukubhalisa at uMnyango Wezifiki, Amaphepha adingekayo ukuze usule Airport Immigration, Air port iveni, Transport eyunivesithi, Consultancy kanye inkonzo yethu amacala.
incwadi Isimemo + Courier Amacala + Bank Trasaction amacala (425SD) is ukukhokhwa kuphela etindzabeni ezweni yomfundi, Ezinye izindaba ukukhokhwa iyakhokhwa ekufikeni.
Abafundi ngaphezu 25years ubudala, incwadi Isimemo + Courier Amacala + Bank Trasaction amacala (525SD)
Note olubalulekile: Namibian, waseZambia, Zimbabwean, Botswana, Swaziland, Lesotho, Mozambique kanye waseMalawi abafundi National, ngoba nabanye abantu abahlala emazweni okukhulunywa futhi waphothula esikoleni sabo.
bezicelo Indian uthole free of incwadi isimemo izindleko kanye ukufundelwa Ukraine ngasiphi enyuvesi.
Abafundi ukhokhe izindleko nje neposi Imali ukuthumela incwadi yabo simemo DHL for i.e kwezidingo. 100USD
* incwadi Isimemo kanye neposi amacala zikhokhwa ngokusebenzisa Bank Transfer. amacala Bank / ikhomishana ukudlulisa imali eceliwe kumelwe esakhokhwa umfundi.
Izinhlelo Iyatholakala Certified,
IT Essentials: PC hardware ne-software:
The IT Essentials: PC idrayiva lwezifundo Software Sinikeza isingeniso computer hardware ne-software adingekayo ukuze kuhlangatshezwane nesidingo esikhulayo entry level yelwati nekuchumana (ICT) ochwepheshe. Izifundo zihlanganisa eziyisisekelo PC ubuchwepheshe, zokuxhumana, kanye nokuvikeleka, futhi ibuye Sinikeza isingeniso imiqondo eziphambili.
Abafundi ukuqedela le nkambo uzokwazi ukuchaza izingxenye sangekhatsi computer, abuthe uhlelo lwekhompyutha, ukufaka uhlelo lokusebenza, futhi uxazulule usebenzisa amathuluzi isistimu nesofthiwe zokuxilonga. Hands-on Labs and Laptop Virtual kanye Virtual amathuluzi zokufunda Desktop ukusiza abafundi ukuthuthukisa ukucabanga kwelihlo elibukhali nelokuzitlamela eziyinkimbinkimbi amakghono wokurarulula imiraro. Cisco Iphakethe Tracer imisebenzi yokufunda sekulingisa-based ukukhuthaza Ukuhlolwa kwenethiwekhi nokulondeka zokuxhumana imiqondo bese uvumele abafundi ukuba izame inethiwekhi ukuziphatha.
IT Essentials: PC hardware ne-software kuyinto izandla-on, ngamakhasimende-career isixazululo e-learning nge Ukugcizelelwa isipiliyoni esiwusizo ukusiza abafundi ukuthuthukisa amakhono ayisisekelo computer, kanye lamakhono abaluleke career. Ikharikhulamu kusiza abafundi balungiselele amathuba ama-career entry level ICT kanye CompTIA A + isitifikedi, esiza abafundi bahlukanise ngokwabo esigcawini ukuze bazithuthukise emisebenzini yabo. Ngaphezu kwalokho, inkambo olunika imfundo pathway kuya CCNA Discovery futhi CCNA Exploration zezifundo.
The Cisco CCNA Exploration Ikharikhulamu iniketa esixoxa edidiyelwe kanye olunzulu zokuxhumana izihloko, kusukela eziyisisekelo ukuze zokusebenza eziphambili kanye namasevisi, kuyilapho amathuba izandla-on practical isipiliyoni kanye soft-kwamakhono. Ikharikhulamu okufundiswa Izingosi okusekelwe ubuchwepheshe, esehlanganise imiqondo ukuxhumana usebenzisa top-down, theory, kanye nendlela edidiyele - izicelo inethiwekhi ukuba Izivumelwano inethiwekhi nezinsiza olunikezwa kulabo izicelo izingqimba engezansi inethiwekhi.
CCNA Exploration yakhelwe for abafundi eziphambili nokuxazulula izinkinga kanye namakhono kohlaziyo. Ikharikhulamu inikeza olunzulu futhi theory yokufunda for abafundi kohlaziyo, abuye asebentise takhi ukuthi wenza kahle imiqondo zobunjiniyela. imisebenzi Interactive obutholakala ohlelweni lwezifundo, kanye okuningiliziwe, okuqukethwe theory. Labs Advanced ukwakha ukucabanga ngokuhlaziya nokuxazulula izinkinga amakhono futhi ukhuthaze ukuhlola ucwaningo.
CCNA Exploration kungaba inikelwe njengenhlangano lwezifundo ezimele noma kuhlanganiswe enkambweni obanzi yokutadisha, ezifana izinhlelo degree in IT, engineering, math, noma isayensi. Nakuba ngokuyinhloko eyenzelwe izikhungo postsecondary, CCNA Exploration kuyafaneleka ngoba abafundi emazingeni amaningi imfundo uma une amakhono adingekayo, futhi uma ndlela sekufundzisa sigcwalisa zabo nendlela yokufunda kanye imigomo yemfundo.
CCNA Exploration kusiza ukulungiselela abafundi amathuba entry level career, imfundo okuqhubekayo, kanye nasemhlabeni jikelele-waqaphela isitifikedi Cisco CCNA.
Cisco Certified Network Professional (CCNP) igunyaza ikhono ukuhlela, nokuqalisa, ukuqinisekisa futhi uxazulule zendawo naseduze-ndawo ibhizinisi amanethiwekhi futhi basebenze ngokubambisana ne ongoti on ukuphepha kwe, izwi, engenawaya video izixazululo. Izitifiketi CCNP kuyafaneleka labo nge okungenani isikhathi esingangonyaka networking nakho abakulungele ukuze athuthukise amakhono abo futhi ngabodwana eyinkimbinkimbi inethiwekhi izixazululo. Labo kuzuzwe CCNP iye yabonisa ladzingekako ibhizinisi izindima ezifana inethiwekhi uchwepheshe, ukweseka engineer, izinhlelo unjiniyela noma inethiwekhi engineer.
Ikharikhulamu Cisco CNA Security inikeza isinyathelo esilandelayo sokuba abantu abafuna ukuthuthukisa yabo CCNA-nezinga lekhono isethi kuhlangatshezwane nesidingo esikhulayo ukulondeka inethiwekhi ochwepheshe. Uhlelo lwemfundo lunikeza isingeniso imiqondo engumongo ukulondeka kanye namakhono adingekayo ukuze akwazi ukufakwa, Ukuxazulula izinkinga kwe, kanye nokuqapha amadivaysi inethiwekhi ukuba silondoloze ubuqotho, nokugcinwa kwemfihlo, nokutholakala kwemininingwane kanye namadivayisi. CCNA Security kusiza ukulungiselela abafundi amathuba entry level security career kanye waqaphela nasemhlabeni jikelele izitifiketi Cisco CCNA Security.
Le course is a izandla-on, ngamakhasimende-career isixazululo e-learning nge Ukugcizelelwa isipiliyoni esiwusizo ukusiza abafundi ukuthuthukisa amakhono akhethekile yezokuphepha, kanye ukucabanga kwelihlo elibukhali nelokuzitlamela eziyinkimbinkimbi izimo zokuxazulula izinkinga azenzeki amakhono. CCNA Ukulondeka kuyisithelo ikharikhulamu ezihlangene nge kokubili inthanethi kanye ekilasini lokufunda. Abafundi ukubhalisa CCNA Security kulindeleke ukuba CCNA-level zokuxhumana imiqondo lelwati nemakhono lasetulu, kanye PC kanye Internet eziyisisekelo amakhono kwemikhumbi.
Nakuba azikho inkambo izimfanelo edingekayo, abafundi bakhuthazwa ukuba ukuqedela CCNA Discovery noma CCNA Exploration lwezifundo ukuthola eliyisisekelo CCNA-level umzila kanye namakhono sizibulale adingekayo ukuze niphumelele kule nkambo. CCNA Security inikeza isinyathelo esilandelayo sokuba CCNA Discovery noma CCNA Exploration abafundi abafuna ukuba bandise CCNA yezinga ikhono isethwe ukuba balungiselele career ngokulondeka inethiwekhi.
The Cisco CCNA Discovery Ikharikhulamu iniketa jikelele zokuxhumana theory, isipiliyoni esiwusizo, kanye namathuba inkambo ukuhlola soft-kwamakhono. Ikharikhulamu okufundiswa Izingosi okusekelwe isicelo, esehlanganise imiqondo ukuxhumana ngaphakathi umongo of network ezindaweni abafundi okungase kubehlele ekuphileni kwabo kwansuku zonke - kusukela ehhovisi elincane kanye nehhovisi ekhaya (ABU) ukuxhumana ukuze more complex ibhizinisi zokuxhumana theory onobuhle kamuva kukharikhulamu.
CCNA Discovery yakhelwe for abafundi PC ayisisekelo amakhono kanye nezibalo eliyisisekelo nokuxazulula izinkinga namakhono. Ikharikhulamu unikeza sihehe yokufunda for abafundi ezibukwayo kanye kinetic more. imisebenzi Abaningi interactive obutholakala kuzo zonke izifundo ukuzobhidliza umbhalo bese usize baqinise kuvisisa umfundi. Ngaphezu kwalokho, inqwaba lwamalebhu bakhuthaze izandla-on eyengeziwe practice.
CCNA Discovery kungaba inikelwe njengenhlangano lwezifundo ezimele noma kuhlanganiswe enkambweni obanzi yokutadisha, ezifana ubuchwepheshe noma kokuqhubeka izinhlelo zemfundo. Lekharikhulamu ezifanele for abafundi emazingeni amaningi imfundo kanye nezinhlobo izikhungo, kuhlanganise izikole eziphakeme, izikole zamabanga, amanyuvesi, amakolishi, Izikole career kanye technical, izinhlangano zomphakathi, kanye nezinye izindawo zokufunda non-bendabuko.
CCNA Discovery kusiza ukulungiselela abafundi amathuba entry level career, imfundo okuqhubekayo, kanye nasemhlabeni jikelele-waqaphela Cisco CCENT futhi CCNA izitifiketi.
Isibuyekezo sokugcina:26 May 19